သန်းထိုက်ဦး| February 18, 2013 | Hits:3,504
| | ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တနေရာတွင် ဇန်န၀ါရီ ၇ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ၄ ရက်ကြာ ကျင်းပသည့် UNFC ၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးအပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ (ဓာတ်ပုံ – သန်းထိုက်ဦး / ဧရာဝတီ)
တပ်မတော်၏ သဘောထား ၆ ချက် မျှတမှုမရှိဟုဆိုတနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ အတွက် UNFC နှင့် အစိုးရ သဘောတူညီမှုမရအစိုးရ နှင့် UNFC နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမည်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ရန် UNFC တောင်းဆိုခွဲခြားကန့်သတ်မှု မြန်မာပြည်ကို နောက်ပြန်ဆွဲဟု ကုလ လူ့အခွင့်အရေး မဟာမင်းကြီး ပြော
ချစ်သခင် February 18, 2013 - 8:23 pm ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်အောင်တော့ မဆွေးနွေးကြပါနဲ့နော်။ လူကြီးလူကောင်းများ၏ နား၊ ဦးနှောက်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုတာကို အစဉ်အမြဲ ထည့်ထားပြီး ပြည်သူများတစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ဒုက်ခရောက်၊ နောက်ကျသွားနေတယ်ဆိုတာ သတိရကြပါ။
Reply ko khine February 20, 2013 - 2:59 am Here is some topic for UNFC have to bring for ethnic minorities right. I believed they, the Burmese people and government will agree on what we want too. We the ethnic groups also want to serve our beloved country and our people.